Imala Doonaald Tiraamp gara UK: Maal qabatanii argamu? - BBC News Afaan Oromoo
Imala Doonaald Tiraamp gara UK: Maal qabatanii argamu?
Daawwannaa Pirezidaantiin US gara UK'tti taasisaniif eegumsa cimsuuf jecha maallaqni paawondii miiliyoonataan lakkaa'amu ramadameera.
Nageenyummaa pirezidaanti Doonaaldi Tiraampiifi naannawa isaatiif jecha gorroon sibiilaa itti naanna'ee ijaarameera. xiyyaaraa hanga konkolaataa pirezidantii, helikooptarootaa hanga konkolaattota eegumsa addaatu taasifama .
Pirezidaantichi affeerraa mootittii Ingiliziitiin Waxabajjii 3 irraa eegalanii guyyoota sadiif UK daawwachuuf jiru.
Akkaataa qophii taasifamaa jiruutiin daawwannaa kanaaf paawondiin miiliyoonni 18 baasii ta'uu danda'a.
Daawwannaa kana dursuuun Waayit Haawus garee tokko gara Biriiteen ergeera.
Pirezidaantichi wayita argamanoo maal qabatanii dhiyaatu laata?
Pirezidaantichi xiyyaara haala addaatiin hojjetame kan 'Air Force One' jedhamuun buufata xiyaaraa 'Stansted' kan kaaba Landanitti argamu qubatu jedhamaa jira.
Xiyyaarri 'Air Force One' gosa xiyyaaraa tokko qofa osoo hin taane xiyyaarota Boeing 747-200B jedhaman lamaan kan lakkoofsa addaa 28000 fi 29000 qabaachuudhaan beekamaniidha.
Xiyyaarota lamaan kana keessaa kan Pirezidaantiin keessa jiru 'Air Force One' jedhama.
Imalaa alanaa kanarratti garuu xiyyaaronni lameenuu faayidaa kennu.
Gabaasi gama US bahaa jiru akka mul'isutti Pirezidaanti Tiraampi ijoolleesaani dargaggeeyyii hiriyoota waliin qabatanii waan imalaa jiraniif xiyyaarri lameen barbaachisaniiru.
Akkaataa meeshaalee elektirooniksii itti hojjetamanii jiraniin xiyyaarri 'Air Force One' xiyyaara waraanaa jalatti ramadama, haleellaa kamiyyuu ofirraa qolachuu danda'a.
Raadaarii nyaaphaa ugguree yoo fedhe misaa'ela abidda baatu itti tufuu danda'a, eeyyee.
Xiyyaarri kun utuu balali'aa jiruu boba'aa guuttachuun utuu hin qubatin yeroo dheeraaf qilleensarra turuu danda'a, wayita balaa kan itti fayyadamu isa kanattidha.
Xiyyaarri Air Force One jedhamu kun meeshaalee kominikeeshinii nageenyummaansaanii mirkanaa'aa ta'e kan of keessaa qabu yoo ta'u odeeffannoo xiyyaarichaa ala jiru hunda argachuu danda'a.
Bilbillii dhaabbii 85, raadiyoowwan fi kompiyuutaroonnis keessatti argamu.
Xiyyaaricha keessa iddoo bal'ina 4000 sq ft qabu kan pirezidaantii fi jilli isaanii itti walargan fi iddoo uffannaa pirezidaantichaa ta'e kutaa sadiin qoodamee jira.
Kutaan kun fulaa itti nyaatan, galma walga'ii, mana yaalaa, kutaa itti ibsa gaazexeessitootaaf kennan, waajjira qondaaltotaa fi iddoo soorata itti qopheessan qaba.
Imala pirezidaantichaa dursuun xiyyaaronni fe'umsaa hedduun, xiyyaara C-17 Globemaster dabalatee, helikooptarootaa fi konkolaattota pirezidaantichaaf qophaa'an baatanii dursanii magaalaa Landan qubataniiru.
Akka gabaasa Waashigitan Post'tti pirezidaanticha yeroo tutiisaanii hunda keessatti qaamolee nageenyaatiin eegamu.
Qaamoleen nageenyaa pirezidaanticha eegan yeroo mara borsaa keessi isaa koodii biyyattiin ittiin niwukilara furguggistu ofirraa qabu kan ''gold codes'' jedhamuun haguugame baatu.
Koodiin kun yeroo barbaachisaa ta'etti bakka jiranirraa niwukilara darbachuuf kan gargaaruudha, yeroo rakkinaaf itti fayyadamuuf baatanii deemu.
Konkolaattonnii fi mootoroonni pirezidaanticha dabaalan , gosa konkolaataa pirezidaantichaa 'Limooziin' lamaan dabalatee, utuu xiyyyaarri ''Air Force One' hin qubatin dursanii bakka qabatanii eegu.
Pirezidaantichi wayita xiyyaara keessa bu'an konkolaataa 'Cadillac One'' kan irra isaarratti 'The Beast' jedhamee barreeffame keessa seenanii deemu.
Kutaan konkolaachisaa fi iddoon namoonni taa'an akka namni ala taa'ee keessa isaa hin arginettidha foddaansaa kan haguugame.
Keemikaalli halleellaa konkolaaticharraa ittisus itti dibamee jira.
kuusaan boba'aa konkolaatichaa ispoonjiidhaan marfamee waan jiruuf yeroo balaan uumamu sadarkaan miidhamuu isaa gadi aanaadha.
Konkolaataan kun meeshaalee elektirooniksiitiin kan dabaalameedha.
Konkolaataan kun namoota torba baachuu danda'a, meeshaaleen eegumsa fayyaa hedduunis keessatti argamu.
Wayita pirezidaantichi socho'u waan magaalaa keessatti ta'u hubachuun salphaadha.
Konkolaattota pirezidaanticha dabaalaniin alatti kan biraan magaalaa keessatti mul'atan konkolaataa poolisootaa, kan garee tikaa, kanneen tajaajila fayyaa kennanii fi warra balaa mudatuu malu lafa jala qolachuuf bobba'aniidha.
Pirezidaantichi kan qabatanii gara UK imalan keessaa kan biraan helikooptaroota 'Marine One' jedhamaniidha.
Dabalataan pirezidaantichi xiyyaara dabalataa kan akka carraa yoo rakkoon isa qabatanii jiran mudate bakka bu'uu danda'u qabatanii dhiyaatu.
Xiyyaarri dabalataa Tiraampi 'Ospreys' utuu saffisaan balali'aa jiruu kan qubachuu danda'uudha.
Tajaajila tikaa fi humna addaa
Daawwannaa Pirezidaanti yeroo darbe gara UK'tti taasisan yeroo darbeerratti eegdotaa fi tikoota isaanii150 dabalatee namooni pirezidaanticha dabaalan 1000 akka ta'antu tilmaamama.
Ogeeyyiin kominikeeshinii, gargaartonni Waayit Hawus keessaa dhufan, doktaroonni, qondaaltonnii fi ogeeyyiin miidiyaa keessatti argamu.
Waayit Hawuus akka jedheetti ammoo imanni itti aanuus ''kan walitti dhufeenya addaa fi cimaa Ameerikaa fi Yunaayitid Kingdamii jidduutti cimsu,'' kan mirkanneessu ta'a.
Dowwannaa pirezidaantichaa eeguun sochii biyya guutuu olaanaadha.
Dowwannaan isaa baatii Addoleesa darbee keessa UK'tti taasiseen eegumsaan walqabatee baasiin paawundii miliyoona 14.2 taasifamu odeeffannoon 'Freedom of Information laws' irraa argame ni mul'isa.
Imallichi mormiin waan simatameefuu miseensoonni polisii kuma 10 ta'an humnoota guutuu biyyatti irraa akka hirmaatan taasifamaniiru.
Qondaaltoonni poolisii farra shororkeessummaa magaalaas qawwee maashinaa hidhachuun human nageenyaa waliin dirreetti bahanii turan.
Kanneen muraasnis dowwannaa pirezidaanti yeroo lammaffaa tufataa jiru, tarii baasiin eegumsaa tibbanaa paawundii miliyoona 18 gahu danda'a jechuun.
Poolisoonni Magaalaa akka jedhaniitti 'sochii ejeensiiwwan hedduu garee hojii eegumsaatiin muxannoo olaanaa qaban keessatti hirmaatan'' fi gama baasiitiin 'baayyeedha' jechuuf yeroo miti.
Mormii naanawa Lanadaniitti karoorfame mataansaa eegumsa barbaachisa.
Gareewwan akka 'Stop Trump Coalition' fi ' Stand Up to Trump' hiriira akka gaggeessan himaa jiru.
Viidiyoo Donaald Tiraamp paarlaamaa Kooriyaa Kibbaatti argamani Kooriyaa Kaabaa akeekkachiisan
Walgahiin Tiraamp fi Putin biyyoota lameeniin fudhatameera
28 Waxabajjii 2018
Dhaabbanni gargaarsaa Donaald Tiraamp cufamuufi